वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट हटाउने…
माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक पदाधिकारी चयन नगरी सकियो, अध्यक्ष दाहालद्वारा थप समय माग
काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक पदाधिकारी चयन नगरी सकिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल…
निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यवहारिक: भोजराज पोखरेल
काठमाडौ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च…
माओवादीको ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन, १५ जना स्वतः सदस्य
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा…
नेपालको अर्थतन्त्रमा धमिरा लागिसक्यो, कसैको राजीनामाले केही हुँदैन
२३ असार २०७९, बिहीबार ०९:२९
राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी मिसन-१६५’ के हो ?
१९ असार २०७९, आईतवार ०८:४८
वायुसेवा निगमको कार्यकारी
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ । सर्वोच्चले आज सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अघिल्लो पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नियुक्ति र हटाएका श्रेष्ठको कार्यकाल बाँकी रहेको देखिएकाले हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । अर्को छलफलसम्मका लागि सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । सरकारले आफूलाई पदावधि नसकिँदै हटाएको भन्दै अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए । सरकारले असार छ गते अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई हटाउँदै सो जिम्मेवारी दिपु […]पुरा पढनुहोस्..
माओवादीको केन्द्रीय समिति
काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक पदाधिकारी चयन नगरी सकिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पदाधिकारी चयनका लागि केही समय माग गरेपछि बैठक पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समिति गठन गरेर टुंगिएको हो । अध्यक्ष दाहालले केही समय परामर्श गरेर पदाधिकारी टुग्याउने आश्वासन दिएका छन । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भने नारायणकाजी श्रेष्ठ बनाउने उनले बताएका छन । दाहालले ४१ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने घोषणा गरेका छन । स्थायी कमिटीमा १५ जना पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य समेटिएका छन । दाहालले आफूसहित नारायणणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, गणेश शाह, गिरिराजमणि पोखरेल, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, मात्रिका […]पुरा पढनुहोस्..
राष्ट्रसंघ न्यूयोर्कमा मेयर
धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख एवं नगर संघ नेपालका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले विकासका मामिलामा धुलिखेल नगरपालिकाको फड्को मारेको बताएका छन्।संयुक्त राष्ट्रसंघ न्युयोर्कमा भाषण गर्दै प्रमुख ब्याञ्जुले धुलिखेल नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धता बमोजिम नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ४ वटा दिगो विकास लक्ष्यहरूको बिस्तृत अध्ययन गरेको बताए। उनले शुन्य गरिबी, सुस्वास्थ्य तथा गुणस्तरीय शिक्षा एवं सफा पिउने पानीको व्यवस्था गर्न नगरपालिका सक्षम रहेको बताए। स्थानीय तह निर्वाचनपछि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने सबैजसो कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नै रहेको बताए। नगरपालिकाले शहरमा सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी, गरिबी निवारण सम्बन्धि कार्यक्रम, बालमैत्री शहर घोषण, साक्षर सहर घोषणा, शिक्षा र स्वास्थ्य […]पुरा पढनुहोस्..
निर्वाचन आयोगले चुनावका
काठमाडौ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यवहारिक भएको आरोप लगाएका छन । काठमाडौंमा आज आयोजित अन्र्तक्रियामा उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरुले नै निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा ८ गुणा बढी रकम खर्च हुने उल्लेख गरेको भन्दै अहिलेको खर्च सीमा व्यवहारिक नभएको बताएका हुन । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुने चिन्ता मात्र नभइ राजनीतिज्ञहरुलाई पैसाले किन्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनको परिणामलाई पैसाले किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले देशलाई क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले चुनावमा खर्च गर्न आउने बाहिरी पैसाको श्रोत […]पुरा पढनुहोस्..
माओवादीको ४१ सदस्यीय
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी गठनको घोषणा गर्दै तत्कालीन नेकपामा रहेका १५ जना स्वतः सदस्य बनेको बताए । थप २६ जना सदस्य स्थायी कमिटीमा सातवटा प्रदेशका इन्चार्ज र कार्यालयका मुख्य सचिव रहने प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसो गर्दा २३ जना पुग्ने र बाँकी १८ मध्ये यसअघि सचिवालयमा रहेकाहरुसमेत समेट्न आफूलाई समय चाहिने प्रचण्डले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न क्षेत्र र एकता प्रक्रियाको समेत मिलाएर केही दिनभित्र स्थायी कमिटीको आधिकारिक नाम सार्वजनिक हुने बताए ।पुरा पढनुहोस्..
‘एसपीपी’मा गरेको राष्ट्रघात
काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम ‘एसपीपी’मा गरेको राष्ट्रघात ओझेल पार्नका लागि बजेटको विषय उठान गरेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा विशेष समय मागेर आफ्ना धारणा राख्दै शर्माले यस्तो दाबी गरेका हुन । शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालय प्रवेश गराएको आरोपमा बुधबार राजीनामा दिएका थिए । सम्बोधनका क्रममा शर्माले माओवादी अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट असफल र एसपीपीमा राष्ट्रघात भएको कुरा ओझेल पार्न एमालेले मुद्दा उचालेको उनको भनाइ छ । शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलका सांसदले यस्ता विषय उठाउनु गलत भएको बताएका छन । उनले संसद्मा नेताहरूले त्यसबारे नबोलेकोमा असन्तुष्टि […]पुरा पढनुहोस्..
अध्यक्ष दाहालले प्रस्ताव
काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेका पोलिटब्युरो सदस्यको नाममा विवाद भएको छ । काठमाडौंमा जारी माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बिहीबार १ सय २५ पोलिटब्युरो सदस्यहरुको नाम वाचन गरे लगत्तै त्यसमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका हुन । उनीहरुले भूगोल क्षेत्र नसमेटिएको तर आफन्तलाई राखिएको भन्दै असहमति जनाएका छन । पोलिटब्यूरो मापदण्डको विषयलाई लिएर केन्द्रीय सदस्यले विरोध जनाएका छन् । पोलिटब्युरो सदस्यको नामावलीप्रति प्रदेश एक, मधेस प्रदेश र काभ्रेका नेताहरुले बढि असन्तुष्टि जनएका छन । दाहालले पोलिटब्यूरो सदस्यमा छोरी, बुहारी, भाइ र स्वकीय सचिवलाई समेत समेटेका छन । सूचीमा भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेकी […]पुरा पढनुहोस्..
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ ओरालो लागेको छ । आज ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय एक डलरमा झरेको छ । कच्चा तेलको मागमा सुस्तता आएसँगै भाउ घट्न थालेको हो । गत जेठ १७ गते प्रतिब्यारेल १ सय २४ डलर पुगेको थियो । त्यस्तै डब्लूटीआई तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९८ डलरमा झरेको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक सिटी ग्रुपको एक रिपोर्टले यो बर्षको अन्त्यसम्म कच्चा तेलको भाउ घटेर प्रतिब्यारेल ६५ डलरसम्म झर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । तेल उत्पादक संघ ओपेकको हस्तक्षेप नहुनु र लगानीमा आकर्षण घट्नुले मूल्यमा कमी आउने अनुमान छ । युरोपेली मुलकले रुसबाट तेल आपूर्तिमा […]पुरा पढनुहोस्..
एसपीपीमा सहभागी नहुने
काठमाडौ । सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । उनले एमसीसी सम्झौंतासँगै संसदबाट पारित १२ बूँदे ब्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल आईपीएस (इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटिजी) को सदस्य राष्ट्र बन्नै नसक्ने धारणा समेत राखे ।।पुरा पढनुहोस्..
उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था प्रदेशको समन्वयमा संघीय प्रहरीकै मातहतमा राख्ने गरी सहमति जुटाएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ को मस्यौदामा उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरीले हेर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्ने जिल्ला भएपनि संघीय राजधानीसमेत भएकाले केन्द्र मातहत राख्ने सहमति समितिले जुटाएको हो । प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरुको बारेमा कार्य सम्पादन गर्न प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरिने गरी […]पुरा पढनुहोस्..
२३ असार २०७९, बिहीबार १७:००
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय…
श्रममन्त्रीको गुनासो- युवा शक्तिलाई
काठमाडौं : श्रम, रोजगार…
२२ असार २०७९, बुधबार १४:३५
मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर कर्जा
काठमाडौ । स्टक ब्रोकर एशोसिएशन…
२१ असार २०७९, मंगलवार ११:४१
दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली
काठमाडौं : रोजगार अनुमति…
२० असार २०७९, सोमबार २१:१८
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले…
२० असार २०७९, सोमबार १८:३८
निगमको प्रस्ताव : मोटरसाइकललाई
२० असार २०७९, सोमबार १८:३३
अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिने
२० असार २०७९, सोमबार १८:०४
सरकारलाई निगमको पत्र- तत्काल
२० असार २०७९, सोमबार १२:०३
सरकारी तहबाटै पेट्रोलियम पदार्थको
नाडाल सेमिफाइनलमा, फाइनल प्रवेशका लागि निकसँग भिड्ने
एजेन्सी : स्पेनिस टेनिस स्टार राफायल नाडाल विम्बल्डन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।सेन्टर…
महिला युरो कप : इंग्ल्यान्डको विजयी शुरुवात
एजेन्सी : इंग्ल्यान्डले महिला युरो फुटबलमा विजयी शुरुवात गरेको छ । ओल्ड ट्रायफोर्डमा गएराति भएको…
खराब ब्याटिङका कारण नेपाल क्यानडासँग पराजित
काठमाडौं : घरेलु टोली क्यानडाविरुद्धको दोस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीयमा नेपालले हार व्यहोरेको छ ।…
सन्दीपले डम्बुला जायन्ट्सबाट लंका प्रिमियर लिग खेल्ने
काठमाडौ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले श्रीलंकाको लंका…
मिस इण्डियाको ताज सिनी शेट्टीलाई
२० असार २०७९, सोमबार ११:१५
१७ असार २०७९, शुक्रबार ११:२२
चलचित्र ‘प्रसाद २’ निर्माण
गायिका दिलमाया सुनारको मृत्यु
थुप्रिएको फोहोर र त्यसका कारण
२१ असार २०७९, मंगलवार १२:१५
२१ असार २०७९, मंगलवार ११:४४
एउटा पालिकामा कम्तिमा १५
२० असार २०७९, सोमबार १२:५०
७० प्रतिशत नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको
१९ असार २०७९, आईतवार १६:१९
नेपालमा ओमिक्रोन भेरियन्टनको नयाँ